दाङमा गाँजा उत्पादन तथा प्रशोधनको २ दिने तालिम - Lekhapadhi मुख्य समाचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
दाङमा गाँजा उत्पादन तथा प्रशोधनको २ दिने तालिम
लेखक : लेखापढी ११ माघ २०७७, आईतवार ०३:४८ मा प्रकाशित
दाङ – दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ स्थित भूँयार थानमा पहिलो पटक गाँजा उत्पादन तथा प्रशोधन तालिम भएको छ।
उक्त तालिम शुक्रबार र शनिबार गरि २ दिन संचालन गरिएको थियो ।
नेपाल गाँजा वैधानिक महाअभियानका अभियन्ता राजिव काफ्लेले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध नेपालमा पनि खुला हुने लगभग निश्चित जस्तै भइसकेको हुँदा गाँजा खेतिको लागि किसान तयार छन् कि छैनन्? भनेर बुझ्न र गाँजा बारेको ज्ञान बाँड्न प्रशिक्षण आयोजना गरिएको बताए। तालिमको प्रशिक्षण राजिब काफ्ले आफैले गरेका हुन् ।
अभियन्ता काफ्लेले भने – करिब ५० वर्षदेखि सरकारले गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आइएको छ। गाँजाका बोटहरु मास्नकै लागि प्रहरी परिचालन गरिएको छ,’ ‘त्यति लामो समयदेखि प्रतिबन्ध लगाइएको गाँजा खेतीको अवस्था के छ? र गाँजा खेति किन आवश्यक छ भनेर किसानलाई ज्ञान दिन तालिमको आयोजना गरिएको हो।’
त्यस्तै नेपालमा पनि २०६७ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा गाँजालाई वैधानिकता दिने बारे प्रस्ताब पेश भएपछि त्यस विषयमा छलफल सुरु भएको थियो।
नेपालमा गाँजा खेतीको राम्रो सम्भावना रहेको भन्दै उनले यहाँ उत्पादित गाँजा भारतलगायत मुलुकमा बेचेर मनग्य आम्दानी लिन सकिने उनीहरुले दाबी गरे। गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाएमा लुकिछिपी हुने व्यापारको अन्त्य हुने र त्यसबाट देशले समेत राम्रो राजश्व संकलन गर्ने अभियन्ताको विश्वास छ।